राजनीतिमा ऐतिहासिक फड्को « Pahilo News
प्रकाशित मिति : 18 May, 2018 8:05 am
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच बिहीबार पार्टी एकीकरण भई मुलुकमा बलियो एवम् सशक्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन भएको छ। नयाँ पार्टीको संघीय संसद्मा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत छ भने ६ प्रदेश सरकारमा नेतृत्व छ। एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा एसियाकै तेस्रो ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी बनेको नेताहरूले दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार चीन र भियतनामपछि नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी तेस्रो ठूलो पार्टी हो। दक्षिण एसियामा भने पहिलो ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी बनेको छ।
०१५ सालको आम निर्वाचनमा कम्युनिस्ट पार्टीले जम्मा ४ सिट जितेको थियो। तर हाल दुई दल मिलेर बनेको कम्युनिस्ट पार्टीसँग प्रतिनिधिसभाको २ सय ७५ सिटमध्ये झन्डै दुईतिहाइ अर्थात् १ सय ७४ सिट छ। ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ४ सय ३ तहको सरकार छ भने प्रदेश २ बाहेक ६ वटा प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले असोज १७ गते राष्ट्रियसभा गृहमै आयोजित कार्यक्रममा पार्टी एकता गर्ने घोषणा गरेका थिए। त्यसयताका निरन्तर छलफल र वार्तापछि एमालेका तत्कालीन महासचिव स्व. नेता मदन भण्डारी र जीवराज आ िश्रतको स्मृति दिवस (जेठ ३ गते) को मौका पारेर पार्टी एकता घोषणा गरिएको हो। कम्युनिस्ट पार्टीसँग जोडिएका सिङ र पुच्छर हटाएर नयाँ पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मात्र राखिएको छ।
दुई अध्यक्षबीचको सहमतिअनुसार बिहीबार बिहान एकता संयोजन समितिले पार्टी एकता गर्ने निर्णय गरेको थियो। लगत्तै दुवै दलका केन्द्रीय कमिटीका अलगअलग बैठक गरी कमिटी भंग गरिएका थिए। साथै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नयाँ पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसी केन्द्रीय सदस्यहरूलाई नयाँ पार्टीका तर्फबाट शपथ खुवाइएको थियो। दुई अध्यक्ष र ९ सदस्यीय सचिवालय रहेको कम्युनिस्ट पार्टी एकता कसैका विरुद्ध लक्षित नरहेको भन्दै ओली र दाहालले कसैलाई पनि विचलित नहुन आग्रह गरेका छन्। एकता घोषणासभामा दाहाल र ओलीले विकास, स्थिरता र समृद्धिका लागि पार्टी एकता गरिएको घोषणा गरे। अरू साना कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनि एकतामा आउन दुवै नेताले आग्रह गरे।
‘अब कम्युनिस्टहरू फुट्न जान्दैनन्, जुटन मात्र जान्दछन्’, ओलीले भने। केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन वटै सरकारमा वामपन्थीको बहुमत बढी पकड रहेको उनको भनाइ छ। ‘नयाँ इतिहास रचना भएको छ’, ओलीले भने,‘कम्युनिस्ट आन्दोलन नयाँ युग र उचाइमा पुगेको छ। अब सही नीति साथ राष्ट्र निर्माणको यात्रामा अघि बढने अठोट छ।’ राजनीतिक मूलधारबाहिर रहेका नेत्रविक्रम चन्दलाई पनि मूलधारमा आउन ओलीले आग्रह गरे। ‘नमिल्दा टेढा कुरा गरेर कुनामा बस्नु कम्युनिस्ट सिद्धान्त होइन, बानी बिगे्रको बच्चा जस्तो सुतली बम पड्काएर हिँडेको छ। त्यो कहाँको, कुन माक्र्सवाद पढेको हो ? ’ उनले प्रश्न गरे।
पार्टी एकताले देशमा सुशासन, स्थिरता, विकास र समृद्धिको बाटो तय गरेको दाहालले बताए। ‘पार्टी एकताको तागतले जनतालाई चाहिएको सुशासन, विकास दिनेछ। राष्ट्रलाई स्वाधीनता, एकता र आत्मसम्मान दिनेछ। नेपाली भएर बाँच्नु र काम गर्नुको गौरव यसले प्रदान गर्नेछ। त्यसकारण यो बहुआयामिक छ,’ उनले भने। कम्युनिस्टहरूसँग त्याग, बलिदान र समर्पणको इतिहास भए पनि त्यसलाई सत्तामा पुग्दा सदुपयोग गर्ने र जनताको हितमा प्रयोग गर्न नसक्दा टिक्न नसकेको बताउँदै दाहालले अव नवगठित कम्युनिस्ट पार्टीले भने त्यस्तो हुन नदिने दाबी गरे। ‘इतिहासमा धेरै कम्युनिस्टले त्याग, बलिदान गरे, संसारलाई थर्काउने गरी क्रान्ति पनि गरे, तर सरकारमा पुगेपछि यति भेस्ट भएकी जनताले नै पिटिपिटी मार्नुपर्ने अवस्थासम्म पनि आयो,’ दाहालले भने, ‘तर अब यो कम्युनिस्ट पार्टीले सत्तामा रहेर पनि जनतासँगको सम्बन्ध टुटाउँदैन। जनता र पार्टी नेताहरूबीचको सम्बन्ध नङमासुको जस्तै बनाएर जान्छ।’
विगतमा कम्युनिस्टहरू फुटे भनेर ठूलाठूला अक्षरमा समाचार आउने गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै ओलीले अब त्यस्तो नहुने बताए। ‘कम्युनिस्टहरूका लागि अब विन्टर सिजन छैन,’ ओलीले भने, ‘विन्टरमा पात झरेको स्याउको रूख जस्तो हुनुहुँदैन।’ कार्यक्रममा दुई दलबीचको ६ बुँदे घोषणापत्र वाचन गर्न मञ्चमा बोलाइएका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झेका थिए। ‘पृथ्वीनारायण शाहले साना दु:खले आज्र्याको मुलुक होइन भने जस्तै यो एकता पनि साना मेहनतले भएको होइन,’ नेपालले भने। विदेश भ्रमणमा रहेका कारण सचिवालय सदस्य झलनाथ खनाल भने कार्यक्रममा अनुपस्थित थिए। एकता घोषणालगत्तै राष्ट्रियसभा गृह र माइतीघर मण्डलालगायत विभिन्न क्षेत्रमा खुसियालीमा दीपावली गरिएको छ भने प्रधानमन्त्री निवासमा बत्तीको झिलिमिलीसहित नेताहरूलाई रात्रिभोज दिइएको थियो। एकताको टुंगो लागेलगत्तै बिहान प्रधानमन्त्री निवासमा दुई अध्यक्षले जापानी प्रजातिको जिन्को वाइलोवा नामक बिरुवा रोपेका थिए।
संयुक्त बैठकपछि अध्यक्षद्वय ओली र दाहालकै नेतृत्वमा शीर्ष नेता नै निर्वाचन आयोग पुगेर पार्टी दर्ताको निवेदन दिएका थिए । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यसअघि नै ऋषि कट्टेलको नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका कारण उनीहरूले भने पार्टी दर्ताको निवदेन दिँदा पार्टी नाममा अन्डर लाइन राखेर दिएका छन् ।